IMelbourne yokuCoca iSteam eyahlukileyo
Shicilela uluhlu Yongeza
Real Estate Listings: » Business Directory » Cleaning Contractors » AU » Victoria » Melbourne » IMelbourne yokuCoca iSteam eyahlukileyo1
Australia, Victoria, Melbourne, Glen Huntly, 3163
1 - 1 ka 2
ipapashiwe 1 year ago
⇐ Uluhlu lwangaphambili
Uluhlu olulandelayo ⇒
Indawo yewebhu:: https://www.uniquesteamcleaning.com.au/
Ikhowudi yeposi: 3163
Ukucoca iSteam okungafaniyo yeyona nkampani ilungileyo kunye nobuchule bokucoca ikhaphethi eMelbourne. Siye safumana iqela leengcali zokucoca iikhaphethi kwaye sonwabile ukubonelela abaxhasi bethu ngeenkonzo. Inkampani yethu yokucoca ngokupheleleyo eseMelbourne, e-Australia.
Ibhaliswe kwi 19. Dec 2018
Thumela umyalezo olandelayo
Nxibelelana nentengiso 045111xxxx
Chwetheza isixeko okanye ingingqi
Khetha udidiAccommodations Spare roomsResidential homes Houses Apartments Flats Townhouses Units Studios Villas Cottages Bungalows HomesLand lots Agricultural LandCommercial Real Estate Hotels Office spaces Industrial premisesAll Others Real Estate All Others Real EstateBusiness Directory Financial Service Providers Moving Companies Home Improvement Contractors Construction Companies Cleaning Contractors Design Services Landscaping Companies Furniture CompaniesReal Estate Agent Directory Real Estate Agents Real Estate Consultancy
Uhlobo lwesivumelwano Kwintengiso Yeyokuqesha
Amagumbi okulala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Igumbi lokuhlambela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ibhaliswe kwi December 19, 2018
ispemu gwenxa iphindwe kabini iphelelwe kuyakhubekisa
3/29 Rothschild Avenue
IMelbourne ((mamela) i-MEL-bərn) sesona sixeko sikhulu kunye nesona sixeko sabantu abaninzi eOstreliya eVictoria, kwaye sesesibini isixeko esihlala abantu abaninzi eOstreliya naseOceania. Igama laso libhekisele kwindibaniselwano yedolophu eyi-9,993 km2 (3,858 sq mi), ebandakanya indawo yedolophu enkulu njengoomasipala abangama-31, ikwayigama elaziwa njengendawo yesixeko sayo. Isixeko sihlala ikakhulu kunxweme lwePort Phillip bay sisasazeka kwiindawo ezinqamlezayo ukuya kumda weDandenong kunye neMacedon, Inqanawa yaseMornington kunye neYarra Valley. Inabemi abazizigidi ezi-5 (iipesenti ezili-19 zabemi baseOstreliya), kwaye abahlali babizwa ngokuba "yiMelburnians" .Isixeko sasekwa nge-30 ka-Agasti ka-1835, kwithanga lase-Bhritane laseNew South Wales, ngokukhululekileyo abahlali abavela koloni yeLizwe iVan Diemen's Land (iTasmania yanamhlanje). Yabandakanywa njengendawo yokuhlala yaseCrown ngo-1837, yaze ke yabizwa ngokuba yiMelbourne nguRhuluneli Jikelele uRichard Bourke ngomhla we-10 ku-Epreli ngo-1837 ukuhlonipha iNkulumbuso yase-Bhritane, uWilliam Lamb, we-2nd Viscount Melbourne. Ngo-1851, kwiminyaka emine emva kokuba uKumkanikazi uVictor evakalise ukuba sisixeko, iMelbourne yaba likomkhulu lekoloni entsha yaseVictoria. Ukuvuka kweminyaka ye-1850 yeVictorian igolide, isixeko sangena kwixesha elide le-boom, ngasekupheleni kweminyaka yee-1880, yayiguqula yaba yenye yezona dolophu ziphambili nezityebileyo emhlabeni. Emva komdibaniselwano e-Australia ngo-1901, yasebenza njengesihlalo sethutyana sikarhulumente wesizwe de iCanberra yaba likomkhulu ngokusisigxina ngo-1927. Namhlanje, liziko lezemali eliphambili kwingingqi yeAsia-Pacific kwaye likwindawo ye-15 kwiZiko lezeMali leHlabathi. I-Index.I-Melbourne likhaya leyona ndawo ibalulekileyo e-Australia, njengeMelbourne Cricket Ground, igalari yeSizwe yaseVictoria kunye neLizwe leMiboniso yeLifa leMveli ebhalwe kuluhlu lweRoyal Exhibition. Ikwayindawo yokuzalwa kwembonakalo yase-Australia, imigaqo yebhola yase-Australia, kunye nemveliso yeefilimu kunye nomabonwakude wase-Australia. Kutshanje, kuye kwaqwalaselwa njengesiXeko seNcwadi yeUNESCO kunye neziko lehlabathi lobugcisa besitalato, umculo ophilayo kunye nomdlalo weqonga. Ibamba iminyhadala emikhulu yaminyaka le efana neAustralia Grand Prix, iAustralia Open kunye neMelbourne Cup, kwaye ibambe iMidlalo yeOlimpiki yeHlobo yango-1956 kunye neMidlalo yeZizwe eziQhelekileyo. Ngenxa yokulinganisa ubukhulu becala kwezolonwabo, ukhenketho kunye nemidlalo, kunye nemfundo, ukhathalelo lwempilo, uphando kunye nophuhliso, iMelbourne ihlala ibekwa njengeyona dolophu iphilayo kwihlabathi ngobuninzi bonyaka wama-2010. Isikhululo senqwelomoya esisebenza esixekweni sisikhululo seenqwelomoya saseMelbourne ekubhekiselelwa kuyo njengesikhululo senqwelomoya saseTullamarine), eyindawo yesibini exakeke kakhulu eOstreliya, kunye nolwandle oluxakekileyo e-Australia kwizibuko laseMelbourne. Isikhululo sayo sikaloliwe esikhulu esiphelweni sisikhululo sikaloliwe iFlinders esitratweni kunye nesitalato sayo sikaloliwe esikhulu kunye nomqeqeshi wendlela umjelo wesikhululo esiphantsi. Inayo nenethiwekhi ebanzi kakhulu yendlela e-Australia kunye nenethiwekhi enkulu yedolophu yetram emhlabeni.
Uluhlu olunxulumene noko
&nbspMelbourne in Victoria (Australia), 3161
Uqikelelo lwasimahla lokuHamba
Ikhaya Malunga Ibhlog Amaxabiso Imephu Ungazikhupheli Unxibelelwano
Inkcazo yepropathi kunye nolwazi oluhambelana nalo oluboniswe kweli phepha, zizinto zentengiso ezibonelelwe ngumthengisi, kwaye aziqulathi iinkcukacha zepropathi. Nceda unxibelelane nomthengisi ngeenkcukacha ezipheleleyo kunye nolwazi oluthe kratya.
Amahlakani Abanikezeli beenkcukacha KhuphelaSibhalele ipostiI-TOSumthetho wabucala
Ngema Bhalisa iakhawunti entsha
Yongeza uluhlu olutsha
Ikhaya Sithumelele imeyile Sitsalele umnxeba
Zonke iindidiIndawo yokuhlalaAmakhaya okuhlalaIqashiso lomhlabaUkuthengisa izindlu nomhlabaBonke abanye abaThengisi beNdawoIsalathiso seShishiniIsiqondisi seArhente yeZindlu
Veza izinto njengegalari / uluhlu
Ukujonga igalari Uluhlu lokujonga
Nokuba yeyiphi iminyakaUsuku olu-1 ubudalaIintsuku ezi-2 ubudala1 iveki ubudalaIiveki ezi-2 ubudala1 inyanga ubudala